Kedụ ka m ga - esi mee ụzọ igwe kwụ m n’efu? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Mepụta ụzọ igwe kwụ otu ebe - otu esi edozi
Mepụta ụzọ igwe kwụ otu ebe - otu esi edozi
Kedụ ka m ga - esi mee ụzọ igwe kwụ m n’efu?
Mee atụmatụ GịIgwe kwụ otu ebe
Pịnye adreesị ma ọ bụ aha ebe mmalite gị n'ọhịa ọchụchọ na GoogleMaapụ.
Ntuziaka akara ga-emepeụzọatụmatụ atụmatụ na GoogleMaapụ.
Pịaịgba ígwèakara ngosi mode.
Pịa akara ngosi elu na ala iji degharịa mmalite.
Kedu usoro nhazi usoro kacha mma?
Ndị 7Cygba ọsọ kacha mmaNkewa &Nsoro AtụmatụNgwa
1 BanyereCgba Rozọ Gburugburu& Ngwa ọdịnala.
5 4.Igwe kwụ otu ebeMụ amaala.
6 5. Ndagharị Na-agagharị.
6 6.Bzọ igwe kwụ otu ebeNavigator.
Ọkt 8 2019
Ndi Komoot di nma na strava?
Ya mere nhọrọ n'etitiNrinaKomootdabere nke ukwuu n'ụdị onye na-agba gị. Ọ bụrụ na ị na-achọ iti elu arụmọrụ maka ọduọ na oge ọnwụnwa, ma ọ bụ na ị na-nnọọ chọrọ ka mpi nta na ndị ọzọ na agba,mgbe ahụ Stravabụmmangwa maka gị.04/23/2021
O nwere ike ịbụ na ị chọpụtala site na ụfọdụ akụkọ anyị na nso nso a banyere ịkwọ ụgbọala nso na ndị dị anya, na anyị na-ekwukarị banyere ihe akpọrọ Komoot, nke bụ eziokwu? Ọfọn, nke a na nke ahụ. Onye nhazi ụzọ na ngwa igodo. Ugbu a, m na-eji oge niile, na mbụ ọ bịara n'ihi na ọ bụ n'efu, yana kwa n'ihi na ọ na-arụ ọrụ nke ọma na isi Wahoo nke anyị na-eji, dị oke mma.
Ka o sina dị, aga m akọwa otu esi eji ya. Komoot nwere ọkwa ọrụ atọ. Nke mbụ, atụmatụ ahụ.
Nlekọta ndị na-agba ịnyịnya ígwè
Nke abuo, n'oge ndekọ ndekọ na igodo. Ma ọ bụ site na ama ngwa ma ọ bụ mekọrịta gị isi unit. Na nke atọ, mgbe njem ahụ gasịrị.
Ya mere bulite foto, kekọrịta, ihe dị ka nke ahụ. Adịghị m n'ụgbọ ịnyịnya ígwè m ugbu a, dị ka ị pụrụ ịhụ. Anaghị m agba ịnyịnya ígwè taa, yabụ anyị na-amalite usoro atụmatụ.
Nwere ike iji ngwa ama maka nke a, ma tupu ma n'oge njem ahụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe usoro, mana maka ihe miri emi m ga-eji nsụgharị desktọọpụ. Enwere obere ohere na arụmọrụ. Nzọụkwụ mbụ ga - abụ ịtọ akaụntụ, dịka m kwuru, ọ bụ n'efu, n'agbanyeghị na ịnwere ike ịzụta site na eserese na ngwa ahụ ị nwere ike ibudata ma jiri offline.
Yabụ ọ bụrụ na ịnweghị mgbaama ekwentị, ị nweelarị data na ekwentị gị ugbua. Ihuenyo mbụ ị hụrụ bụ ndekọ nke njem gị ma ọ bụ nke onye ọzọ ịchọrọ ịgbaso. Ma anyị na-aga ngwa ngwa gaa na peeji nke atụmatụ ụzọ.
Malite ugbu a enter tinye isi mmalite na njedebe, ma ọ bụ site na ịpị map ma ọ bụ tinye adreesị, mgbe ahụ ị nwere ike ịhọrọ ma ọ bụ otu ụzọ ma ọ bụ ụzọ okirikiri. Ugbu a ị matara ebe ịchọrọ ịga, nke ahụ dị mma, mana ọ bụrụ na ọ bụghị, ma ọ bụrụ na ịchọọ mmụọ nsọ, ị ga-ahụ na ọtụtụ obere akara igwe kwụ otu ebe na-acha uhie uhie gbasasịa na maapụ ahụ. Ọfọn, ihe ndị a bụ ihe ngosipụta nke ndị ọzọ hapụrụ iji nyere gị aka ịhazi ụzọ gị. O nwere ike ịbụ ihe ọ bụla site na echiche mara mma gaa obere ụlọ ahịa kọfị mara mma.
Ma mgbe ịpịrị na ya, ịgbakwunye ya n'okporo ụzọ gị bụ ụzọ dị mfe na ngwa ngwa iji mee ụkọ oge a na ụyọkọ pals. Ọ na-amalite ebe a n'ụsọ oké osimiri ndịda nke UK wee laghachi n'ụlọ. Ugbu a, m banyere mmalite Weymouth, ebe Bristol! Ma mgbe ahụ, m nwere ike ịpinye iji tinye isi ihe ole na ole. ụzọ ahụ.
Cider, m ga-enwe ya, ma eleghị anya, m ga-enwe nnukwu okporo ámá m maraworị. Iji mee nke a, enwere m ike ịpị maapụ ahụ ma tinye ya dị ka ụzọ. Anyị na-enweta ọtụtụ ụzọ dị iche iche sitere na Komoot algọridim na nke ahụ dabere na ụdị njem ị họọrọ.
Yabụ ọ nwere ike ịbụ njem njem ọsịsọ dị elu, ọ nwere ike ịbụ ọmarịcha ụzọ, ọ nwere ike bụrụ ajịrịja ajị, ọ nwere ike ịbụ ịgba ịnyịnya ugwu, ọ nwere ike ọ gaghị agba ma ọlị, kama ịga ije ma ọ bụ ịgba ọsọ. Agbanyeghi na amachaghi m ihe kpatara na ichoro ime ihe ichoro ichoro site na ịpị akara ngosi a. Dị ka ị pụrụ ịhụ n’ebe a.
Yabụ nke a bụ ụzọ anyị na - eji ajịrịja ajịrịja ajị anụ, dabere na echiche Komoot, ụzọ kachasị mma m ga - esi si ebe a kwaga biya. Anyị nwere ọnụọgụ niile maka ụzọ a. Ogologo njem ahụ, ihe ị chọrọ, ọchịchọ ahụ, ọbụna atụmatụ nke ogologo oge ọ ga-adị, ọ bụrụhaala na ị gaghị akwụsị ogologo oge iji were foto dị ka James, ma ọ bụ ma eleghị anya ị dinara ala.
Njirimara kachasị dị jụụ bụ ọrụ nchịkọta na ụdị ụzọ. Yabụ, ebe ọ bụ na Komoot na-eji maapụ okirikiri mmeghe ma ọ bụ ụzọ ụzọ mepere emepe, o nweela nkọwa zuru oke nke obodo nyere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mita ọ bụla nke ụzọ ahụ bụ ụzọ ma ọ bụ ụzọ, ọ maara kpọmkwem ụdị ihu ị ga-atụ anya ya. Yabụ ọ bụrụ na anyị gbanwee site na gravel ịnyịnya na njem igwe kwụ otu ebe na nke a, anyị nwere ike ịchọpụta na mberede ọnụọgụ nke ụzọ na-arịwanye elu, anyị dị kilomita 27.3 na otu ụzọ ụkwụ na ngụkọta nke ihe dịka 35% nke ụzọ dị ugbu a enweghị atụ.
Na profaịlụ mmekọrịta dị n'okpuru, ị nwekwara ike ịhụ kpọmkwem mpaghara ị nwere ike ịtụ anya mgbe ị na-arịgo ma ọ bụ na-agbadata. Maka freaks ndị na-achịkwa n'etiti anyị, n'ezie, ịnwere ike ijikwa obere njikwa site na ịtinyekwu ụzọ iji manye ya n'ụzọ ịchọrọ. Iji nweta ozi ndị ọzọ ga-enyere gị aka ime mkpebi gị, ịnwere ike ịgbanwe n'etiti ụdị kaadị Komoot dị iche iche iji mepe maapụ ụzọ, mepee igwe kwụ otu ebe, nke ị nwekwara ike ịchọta ozi gbasara akụrụngwa ịgba ịnyịnya na ụzọ igwe kwụ otu ebe.
Ugbua ndoputa ndi mbu tinye n’ejihie site na uzo Komoot kwuru. Algọridim ha dabere na data, yabụ ihe ha maara banyere ụdị elu ụzọ na ịrị elu, ihe ndị dị ka nke ahụ. Yabụ ọ bụrụ na ị họrọ isi na ya pụọ, ọ bụ gị ka ọ dị n’aka.
Nwere ike ileghara algorithms Komoot anya kpamkpam na, n'eziokwu, leghaara ụzọ niile na ụzọ anya na-enweghị atụmatụ maka ịba uru maka ndị na-agba ọsọ na ndị ọgba ọsọ, m gaara eche, dị ka ndị na-agba ígwè. Mana m ji ya mee ihe, n'ezie afọ gara aga na Morocco mgbe anyị hụrụ na Google satellite machie na e nwere n'ezie ụfọdụ okporo ụzọ gafee Atlas Mountains, ọ dịbeghị edepụtara ma. Okwesiri ighota na dika ihe ikpeazu n’ime oge ichoro i gha akuko ngwa ngwa GPX, TCX ma obu FIT, inwere ike ichekwa ya dika ihe emechara ma obu webata ya n’ime onye uzo uzo, ebe inwere ike ebuli ya dị ka ị chọrọ nwere ike ịgbanwe.
Ugbu a ị pụọ, enwere ụzọ ole na ole Komoot nwere ike inyere gị aka ịnyagharịa ngwa ngwa. Ma ọ bụ site na ijikọ na isi ngwaọrụ gị ma ọ bụ site na iji ngwa ahụ na ekwentị gị. Ugbu a, anyị elebala anya otu esi azụta maapụ wee budata ha na ekwentị gị.
Nke a zuru oke ma ọ bụrụ na ị na-aga mba ọzọ ma achọghị ịkwụ ụgwọ maka data ndị ọzọ. Ọ zuru oke ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa ndụ batrị ka ị nwere ike ịnyagharịa mgbe ekwentị gị bụ ice na ọnọdụ ụgbọelu. Ma ọ bụ n'ezie, ọ dị mkpa ma ọ bụrụ na ị na-apụ n'okporo ụzọ a pịrị apị, karịa akara ekwentị, ị nwere ike ị nweta ya na nsụgharị nweere onwe ya, mana ị ga-atụkwasị obi na ikike nke gị ịhapụ n'ezie, agbanyeghị ma ị nweta furu efu ị nwere ike ibudata map ndị kwesịrị ekwesị.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị pụọ, nke a nwere ike inyere gị aka ịlaghachi na ụzọ. Ọ bụrụ na ị na-eji ekwentị gị ka ị malite ịnyagharịa ịmalite ndekọ, ị pịa nnukwu bọtịnụ Home igodo na ị ga-aga. Nwere uzo-site-uzo ntụziaka, ma audio otú i nwere ike itinye ekwentị gị n'akpa uwe, na visual otú i nwere ike clip ekwentị gị na njikwa gị kwa, ọ bụrụ na ị chọrọ.
Ugbu a, m na-eme ka m synced na m isi unit. Ya mere, Komoot emeela ka njikọta ya na ọtụtụ isi ngwaọrụ GPS dị na ya. N'ihe banyere ngwaọrụ Wahoo a, m mekọrịrị akaụntụ Komoot na ngwa Wahoo, mgbe ahụ, ebugharị m niile na-akpaghị aka na ngwaọrụ mgbe ejiri ya na WiFi.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịgbanwe ụzọ gị maka ebumnuche ọ bụla mgbe ị na-agagharị, ọ bụrụ na ị nwere mgbaama ekwentị nke a dị oke mfe, ị pịa ebe ịchọrọ ịga mgbakwunye na map dị ka ma ọ bụrụ na ị mere atụmatụ ya na mbụ ma hey presto ọ ga-edegharị ya maka gị. (exhales sharply) Phew, kedu ihe The Epic. Ugbu a ị mechara njem gị, a ga-echekwa ya na akpaghị aka dịka njem njegharị nkeonwe.
Ugbu a, ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ị jiri ekwentị gị dekọọ ya, ma ọ bụ na nke a Wahoo nke ga-emekọrịta ya na akpaghị aka. Mgbe ahụ ị nwere ike pịa ọrụ a wee nye ya aha, ị nwekwara ike bulite foto, kesaa ya na ndị enyi gị, pịa onye sonyere gị na njem ahụ. Ugbu a ọ dị oke mfe ibugo foto.
Ọ bụrụ na ị geotagged ha n'oge ndekọ, a ga-ebugo ha na-akpaghị aka na ebe kwesịrị ekwesị na maapụ ahụ. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ị nwere ike ịhapụ ntụtụ ma bulite ya n'ebe ahụ. You nwere ike n'ezie bulitekwa nke gị pụta ìhè ts, nke anyị kwurula.
Ya mere, ọ nwere ike ịbụ ebe, ma ọ bụ ọ nwere ike ịbụ ụzọ okporo ụzọ ma ọ bụ okporo ụzọ. Click pịa ebe ahụ na maapụ wee bulite foto nke gị, nye ya aha, nye ya nkọwa, na mgbe mmadụ nọ ebe ahụ ị nwere ike ịme ntuli aka ma ọ bụ ala na nkọwa nkọwa nke gị na nke gị tinye foto nke gị , ya mere, anyị na-aga! Enwere olile anya na ichotara obere foto a banyere otu esi eji Komoot bara ezigbo uru. M na-agba gị ume ka ị nwalee ya.
Ọ bụrụ na enweghị ihe ọzọ, ị nwere ike ịga profaịlụ GCN anyị nwere ebe ahụ n'ihi na anyị nwere ọtụtụ ụzọ ndị anyị mere n'ime izu ole na ole gara aga na ọnwa. Gụnyere ihe dịka North Coast 500 na njem Bekee anyị. Jide n'aka na ị nyere anyị nnukwu mkpịsị aka, mee ka anyị mata ihe ị chere na ngalaba ndị dị n'okpuru ebe a ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ nke a North Shore 500 ederede ị hụbeghị ya, pịa ụzọ gị site na ihuenyo ugbu a.
Ego ole bụ ụzọ strava?
.B.Nrindenye ahaụgwọ$ 5 otu ọnwa maka ndebanye aha kwa afọ. Ndị ọrụ ọhụụ nwere ike ịnweta ọnwa abụọ mbụ n'efu mgbe ha debanyere aha ha na afọ ahụ dum. Yabụ, kedu atụmatụ ndị na-abụghị ndị debanyere aha ga-eji nwayọ mee? Anyị ekwuola yaụzọonye na-ewu ụlọ, nke bụ ngwá ọrụ bara uru.19.05.2020
Gbọ ndị dị ka nke a ekwesịghị ịbụ ịnyịnya naanị ị na-arọ nrọ. Taa, m nọ ebe a iji nyere aka zaa ajụjụ ndị ọgba ịnyịnya ígwè nwere n'otu oge - 'Ebee ka anyị ga-esi gba igwe kwụ otu ebe'. Anyị ga-eji Google Maps, netwọkụ mgbatị dị ka Strava, na soshal midia iji nyere gị aka ịchọta ụzọ ọzọ dị mma, na-atụ anya na ị gaghị ehicha ụlọ.
Ya mere, ka na-amalite na m akpa n'ọnụ: “Stalking” - na nke ahụ bụ ihe anyị na-aga ime na Strava. Yabụ ihe ị ga - eme bụ ịchọta ụlọ ọgbakọ Strava n'obodo gị ma ịgaghị esonye na klọb ahụ, lee anya na onye ndu. Nwere ike idozi ndepụta ahụ site na elu, anya ma ọ bụ. ụdị njem kachasị ogologo - dabere na ị na-achọ ogologo njem ma ọ bụ njem na ọchịchọ.
Ugbu a anyị abịarutela akụkụ na-agba ọsọ. Nke a bụ usoro dị egwu na nke efu, mana ọ bụrụ na ị na-aga maka ndị na-agba ígwè nwere nnukwu stats, enwere ezigbo ohere anyị ga-ahụ ihe anyị na-achọ, pịa ka ị gaa na peeji Stalkees gị, ma ugbu a, ọ ga-akacha mfe ịlele foto. Site ebe a, pịgharịa na foto ma ọ bụrụ na ịchọta ebe ị nwere mmasị, pịa njikọ a ka ịwụli elu na ọrụ ahụ ma ị nwere ike ịlele ụzọ ebe ahụ.
E wezụga foto, nhọrọ ọzọ bụ ileba anya na mmemme ha, ihe ngosi mmanya ga-enye gị echiche nke izu ndị nwere draịva kachasị ogologo ma ọ bụ ihe kachasị mmasị. Họrọ otu ọnụ ọgụgụ nke nwere uche maka ụdị ụgbọ ịnyịnya ị na-achọ, wee lelee maapụ ọrụ ndị na - egosi - nyocha maka njem ndị na - adọrọ mmasị ma gbagoo na mmemme maka nkọwa iji nweta. Tụlee iso ha ka ọrụ ha ga-egosi na nri Strava gị ka ị wee nwee ike ịchọpụta ụzọ dị jụụ ozugbo a chụpụrụ ha.
Ka anyị kwuo maka netwọkụ mmekọrịta ‘dị’ ya dịka Facebook na Instagram. Ọtụtụ obodo nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị na-agba ígwè nwere ọtụtụ ndị otu cyclist Facebook ị nwere ike isonyere. Ọ dị mfe ịchọta ọdịnaya metụtara ịnyịnya ígwè na Instagram site na iji ọchụchọ ma ọ bụ hashtag g Ndị na-agba ịnyịnya igwe hụrụ n'anya na-ese foto na isiokwu nke njem ha.
Ihe ikwesiri ime bu ka ibido mkparita uka ma juo ebe ewere obere vidiyo a ma otutu oge ha gha enwe obi uto igwa gi uzo ndi ozo. # 2 Google Maps Atụmatụ m ọzọ bụ Ma Google Maps, ọkachasị nlele satịlaịtị. Chọọ ebe ụfọdụ mepere emepe - ị ga - ahụ na mpaghara a mepere emepe karịa, nwee ọtụtụ osisi na ụlọ ole na ole, o yikarịrị ka ịkwọ ụgbọ ala ebe a na --enwe obere njem ga - atọ ụtọ karịa.
N’ezie, o yikarịrị ka ị ga-ahụ ebe ndị dị otú ahụ ozugbo ị hapụrụ obodo ahụ kpamkpam. Ugbu a ị pụọ n’ókèala obodo gị, ị nwere ike chọọ njirimara ndị ọzọ dị ka mmiri ma mgbe ị hụrụ okporo ụzọ gafere were ya n’ihi na ọ dị mma mgbe ọ bụla ịhụ ọdọ ma ọ bụ osimiri na-asọ kwa na-anụ ka ị na-anya. . Ihe ndị ọzọ ị ga-achọ bụ ugwu - ma ọ bụrụhaala na iji Google Maps nwere 3D View wee hụ ha, aga m agbanwe Google Earth n'ihi na nke a bụ nke doro gị anya nke ọma na ọ dị mma karịa Ọzọkwa.
Ugwu na-amasị m n'ihi na ọrịrị na-atọ m ụtọ ịrịgo, ọ na-eme nnukwu mgbatị ahụ, echiche dị egwu, na ọdịda dị oke egwu. Ugbu a echekwala na ị maara ugwu niile dị na mpaghara gị - a ga-enwe ugwu ugwu mara mma nke onye ọ bụla na-ekwu maka ya, mana enwere ike inwe ugwu ugwu ndị ọzọ na ugwu zoro ezo n'obodo gị nke na ọ nweghị onye ga-enye nsogbu iji gbalịa chụpụ ha. Laghachite na Google Maps, ọ bụrụ na i nyochaa odida obodo, ihe ịrịba ama-ama nke ịrị elu na-achọ mgbanwe na map.
Ọ bụrụ na ị hụ ha, ụzọ a nwere ike ịbụ ugwu. Ma ọ bụrụ na ị attentionara ntị na ịgụ map na klaasị ọdịdị ala, ị ga-echeta na ị nwere ike ịgbanwee map oge niile wee lelee usoro contour iji jide n'aka. Ogo a pụtakwara na ọnọdụ a ma ọ bụrụ na i buputa ntakịrị.
Akụkụ kachasị mma nke google satellite view, Otú ọ dị, bụ ike ịchọta ụzọ ụkwụ ị na-agaghị ahụ na map akara dị ka okporo ụzọ dị ka ebe a bụ ụzọ nke na-amalite n'elu Katraj ghat wee gaa n'ụzọ niile Bopdev ghat Tupu anyị ahapụ Google Maps, echefula iji Street View, PhotoSpheres na Foto iji nyere aka ịhazi ụzọ gị. Ọbụna na ebe dịka India ebe enweghị echiche n'okporo ámá, Pegman ka ga - enyere gị aka inweta PhotoSpheres dị mkpa dị ka nke a na - egosi gị etu ugwu a dị ma enwere m ike ịhụ ụzọ anyị ga - aga, ị nwekwara ike ile foto nke dị iche iche akara ngosi iji mara onwe gị n'ụzọ ndị dị n'akụkụ ụzọ gị na otu iji nweta ohere ịlele n'okporo ámá ma ọ bụ ụzọ ebe a. N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ịchọta onwe gị na mba ebe Street Street dị, ị nwere ike iji ya chọpụta ọtụtụ n'okporo ámá ị ga-agba ịnyịnya ígwè.
Ugbu a, iji Google Maps, anyị achọpụtala ọmarịcha njem ma ọ bụ ụfọdụ ụzọ ụkwụ njem anyị ga-achọ ịnwale. Kedu ka anyị ga - esi mepụta ụzọ dị mma iji ruo ebe ahụ? Otu ụzọ bụ imeghe atụmatụ nyocha nke Strava ma chọọ akụkụ gburugburu mpaghara ịchọrọ iru. Dịka ọmụmaatụ, achọpụtara m na ngalaba a ezighi ezi maka ịrịgo Lohagad na Lonavala.
Anyị nwere ike ileba anya na ndepụta nke onye ọ bụla na-agba otu a ma nyochaa ụzọ ndị ha jere iji bịa ebe a. Mayank yiri ka ọ gbadatara ụzọ dị iche, gbagoro n'Ọdọ Mmiri Pavna maka ntakịrị ma kụọ ụzọ awara awara ma mee obere aka. Ajit mere njem dị mfe ịgagharị na mgbidi dị n'okporo ụzọ awara awara, Aditya na-agbakwa ụzọ dị iche iche laghachi na Pune.
Otu ebe, ụzọ atọ dị iche iche na-esite n'echiche site na ile anya ole na ole, nke ahụ bụ naanị otu ihe kpatara akụkụ Strava ji dị oke mma. Akụ ọzọ bara uru Strava bụ map okpomọkụ ụwa. Maapụ ọkụ na-egosi gị ebe ọtụtụ mmadụ na-anya ụgbọ ala na mpaghara enyere - ọkụ ọkụ pụtara na ndị mmadụ na-anya ụgbọ ebe ahụ, ị ​​nwere ike ịme nke a dịka ụzọ dị ngwa iji chọta ụzọ ndị ama ama na obodo.
Ebee ka okpomoku ahu na-enwu n'ezie, agbanyeghị, ebe a na - adighi anya - ebe a bu onu ogugu nke Katraj na Bopdev Ghats, imaatu - oburu na ichoro ma o puru ibu site n'elu rue nke ozo, gabiga ugwu, Ogwe odo odo gbara ọchịchịrị ebe a na - agwa gị na emere ya - ọ bụghị ọtụtụ mmadụ, mana ị maara na ọ nwere ike ịkpụ. Site na ebe a ị nwekwara ike ịhụ ụzọ siri ike nke na-adịghị ebugharị ma ọ bụ na ọ bụghị nke na-adọrọ adọrọ - ọ pụtara na ndị mmadụ ezughi ebe ahụ, ọbụlagodi na Strava. Ka ị na-apụ Strava, Komoot bụ ngwa ọrụ na-ewu ewu na-ewu ewu na-arụ ọrụ na njedebe, Komoot ga-atụ aro ụzọ dabere na otu ị chọrọ isi banye ebe ahụ.
Yabụ mgbe anyị sịrị họrọ Fort Fortona Tikona ọ na-egosi m nhọrọ maka ịgba ịnyịnya n'okporo ụzọ yana ụzọ dịtụ iche mgbe m họọrọ ụdị ịnyịnya ugwu na ụzọ ụzọ na pavụ. Na-amasị m ihe mmịfe a nke na-agwa m ogologo oge dabere na ogo ahụike m ga-ewe ugbu a. Ugbu a, anyị abịarutela ụzọ umengwụ ịchọta ụzọ, mana ndị a nwere ike bụrụ ụfọdụ n'ime ụzọ gasị kachasị mma ị nwere ike ịchọta.
Ọ bụrụ na ịga na webụsaịtị dị ka Gbaa ịnyịnya na GPS wee pịa 'Find Routes', ị ga-ahụ ụzọ ụgbọ mmiri mbụ nke ndị nnọchi anya mpaghara rụrụ site na nkọwapụta zuru oke, ntuziaka, ebe nkwụsị olulu, foto na ndetu nke onye nnọchi anya gị maka ị kwadebere nke ọma. njem ahụ. Ugbu a ị nwere ike tinye njirisi iji chọta ụzọ ị na-achọ, n'ezie, mana ụzọ ndị nnọchi anya gọọmentị adịghị ebe niile - yabụ na mba dịka India ị nwere ike ịchọta ụzọ n'onwe ya na foto ole na ole - mana na-enweghị nkọwa ndị a. otu Enwere ụfọdụ nnukwu ụzọ gasị maka ihe ngosi. Komoot nwekwara ụzọ gasị, dịkwa ka Gbaa ịnyịnya na GPS, ụfọdụ ụzọ gasị zuru oke ebe ndị ọzọ dị mfe.
Maka ụzọ ụzọ igwe kwụ otu ebe ugwu, ịnwere ike ịnwale weebụsaịtị dịka Tracks Single na Trailforks. Clezọ okirikiri bụ ịgagharị. Ọ bụrụ na ị na-apụ na-agbanye okporo ụzọ ma ọ bụ ụgbọ oloko na-aga ebe ị na-amaghị cheta iwere ya.
Enweghị m ike ịgwa gị oge ole m gbara, chọta ụzọ dị ukwuu ma ọ bụ nwee ọmarịcha ụgbọala naanị n'ihi na ahọpụtara m ụdị ụzọ ahụ. Could nwere ike idetu ebe ahụ wee mụọ ya mgbe ị laruru, mana ọ bụrụ na ị nwere oge - ị nọ ebe ahụ, buru ụzọ dị larịị ma ọ bụ ụzọ ụkwụ wee hụ ebe ọ na-eduga. Nwere ike ibudata Google Maps na ekwentị gị ma mee nyocha na saịtị ahụ.
Ugbu a, ọ bụrụ na ịmara nnukwu ụzọ a na-amaghị, cheta ime obere ihe maka obodo ịgba ịnyịnya ígwè gị site na ịse foto na ndetu, ịmepụta ngalaba, na ịkekọrịta ụzọ ahụ na mgbasa ozi mmekọrịta ọ bụla masịrị gị. Ọ bụrụ n’inwere ụzọ ị ga - esi kesaa, hapụ azịza n’okpuru - ọ ga - amasị m ịnụ gị. Ọwa a nwekwara ọtụtụ ụzọ isiokwu wee kwụọ ụgwọ ma lelee ndepụta egwu a nke ụzọ ụgbọ ịnyịnya India, ma ọ bụ ọ bụrụ na ike gwụrụ gị mgbe ị na-agba ịnyịnya - lelee edemede a iji mee ka njem gị dị ọhụrụ, daalụ maka ịnya ụgbọ ala, ma hụ gị oge ọzọ - gaa n'ihu nyocha.
Komoot kwesiri ịkwụ ụgwọ ya?
Ezigbo ego nyere nke ahụọ bụugwo - otu ugwo maka ihe obula. Ọ dị ezigbo mma: ntụgharị na igodo dị mma, ọtụtụ ọdịnaya. Utinggba ọsọ dị ike, ịgagharị dị mma, nkewa na ịntanetị na igodo. Enweghị Strava ma ọ bụ njikọta ọnụ ụzọ ndị ọzọ, ọdịnaya na-esiri ike ịchọgharị ma ọ bụ chọta.Eprel 4 2019
Kedu ka m ga esi eji atụmatụ Komoot mee ụzọ?
Inghọrọ ebe mbido na njedebe na eserese ngosi
Pịa ebe ọ bụla na maapụ ma họrọ “Bido ebe a”. Ihekomoot ụzọ nhaziga-akpaghị aka na-azọpụta ya dị ka gị amalite. Pịa na ebe ọzọ na maapụ ahụ iji kaa akara ebe ị na-aga.
Komoot ọ bụ ezigbo ngwa?
N'ozuzu, igodo ahụ bụ n'ezieezi. Ọ bụrụ n ’ọ na - amasị gị ịbụ onye a na - eduzi ma ọ bụrụ na ị na - eduzi ya, ọ bụ otu n’ime sistemụ arụmọrụ kachasị mma m ji mee ihe, ọ kachasị mma maka nduzi olu n’igwe.Eprel 4 2019
Strava bara uru na 2020?
Gbanwee,NriSummit gosipụtara nke ukwuukwesịrịya. Ugbu a amaara m ihe ndị anaghị etinye na ụdị ọkọlọtọ, echeghị m na m nwere ike ịhapụ ndenye aha m. Ihe kachasị m mma bụ ihe omume adaba, ndekọ ọzụzụ na GAP.Mkpebi 21 2020
Strava bara uru ịkwụ ụgwọ maka 2020?
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na data ma na-egosipụta ọtụtụ - ọkachasị mgbeyaabịa na-agba ọsọ na ịgba ịnyịnya ígwè - mgbe ee, e nwere ọtụtụ ebe a ị ga-enwe obi ụtọ. Maka ndị na-agba ịnyịnya ígwè, ikekwe mkpesa nke ngalabakwesịrịụgwọ naanị na anyị,ọ bụihe ndị a na-eme anyị obi ụtọ, mana anyị bụ ndị geeks data.
Kedu nke ka mma strava ka ọ bụ Komoot?
Mgbe atụnyereNrivs.Komoot, Ndị obodo Slant na-atụ aroKomootmaka otutu mmadu. Na ajụjụ “Gịnị bụ ihe kacha mma GPS ngwa maka ndị ịnyịnya ígwè maka ịgagharị na iOS?”Komootna-họọrọ 1st mgbeNrinọ n'ọkwa nke atọ.Komootawade data n'okporo ụzọ / nzọ ụkwụ ụdị, elu, wdg
Ndi Komoot igbapu batrị?
Olileanya na nke a ruru onye nwere ike inyere aka. Na nso nso a malitere ijiKomootdị ka ọrụ ntugharị ntụgharị-site-na. Otú ọ dị,batrị igbapuna ekwentị m dị egwu, na-eji GPS na Bluetooth eme ihe mgbe niile na ihuenyo maka igodo.Batrị drainssite na 70% gaa 0% n'ime otu elekere ma ọ bụ abụọ na igbe a.